Ithegi: umxholo ofanelekileyo | Martech Zone
Maka: umxholo ofanelekileyo
NgoLwesine, Meyi 21, 2015 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 URichard Hollis
Inkulungwane yama-21 ikubonile ukuvela kweetekhnoloji ezininzi ezisenza ukuba sithengise ngempumelelo amashishini ngendlela edibeneyo nenempembelelo xa kuthelekiswa nexesha elidlulileyo. Ukusuka kwiiblogi, kwiivenkile ze-ecommerce, kwiindawo zentengiso ezikwi-intanethi ukuya kumajelo eendaba ezentlalo, iwebhu iye yaba yindawo yoluntu yokufumana ulwazi kubathengi yokukhangela nokutya. Ngethuba lokuqala, i-Intanethi idale amathuba amatsha amashishini njengoko izixhobo zedijithali ziye zanceda ukulungelelanisa kunye nokuzenzekelayo
Abathengisi abaninzi basebenzisa enye itekhnoloji abayithandayo okanye bekhululekile kuyo kwaye bangazihoyi ezinye. Ndingumxhasi omkhulu wokuzenzekelayo kwaye umthengisi uthengisa imiyalezo yabo nangayiphi na indlela, imilo, okanye ifom-kangangokuba ayikaze yenzakalise iinzame zabo zentengiso. Ngokubhekisele kwinkampani ehambisa umxholo kwindawo yayo, amanqaku, amaphepha amhlophe, izifundo zetyala okanye ibhlog yayo, ndiyakholelwa ukuba zintathu izitshixo zokwenza